KHUDBADDA (CILANTRO) HONEY: QAABDHISMEEDKA IYO WAXTARKA WAXTARKA EE QALABKA - WAXYAABAHA CANABKA AH
Coriander (lat - Coriandrum) waa warshad etromaslennoe herbaceous ah ee dallad qoys.
Dad badan ayaa ogyahay nadiifiyaha sababtoo ah abuurkeeda, taas oo loo isticmaalo sida cunto dabiici ah, ama caleemaha iyo caleemaha, oo loo yaqaan "cilantro" (quinda) oo loo isticmaalo geed khudaar ah.
Wax yar oo aan garanayn waa mashiinka dhirta sida geedka malab, oo siinaya malab leh dhadhan fiican leh iyo malab caafimaad leh.
Ma taqaanaa? Beeraha dhoobada ah ayaa lagu beeray Masar hore iyo Giriiggii hore. Laga soo bilaabo wakhtigaas, waxaa la og yahay ma aha oo kaliya dhadhan, laakiin sidoo kale sida qalabka bogsashada.
Dhaqanka dhulalka - Mediterranean. Maanta waxaa lagu beeray dalal badan oo adduunka ah, gaar ahaan waxa ay caan ku tahay Koonfurta Caucasus, Central Asia, iyo Crimean.
Intaa waxaa dheer in ay u isticmaasho dhir udgoon iyo midab malab, geedahaas waxaa kale oo ku jira saliidda farsamada dufanka iyo saliida lagama maarmaanka ah. Qalabka ugu dambeeya waxaa loo adeegsadaa soosaarka khamriga iyo khamriga. Magacyada kale ee cowskan waa kishnets, kolyandra, klopovnik.
Kalluunku wuxuu hodan ku yahay dufanka, borotiinka iyo karbohidraatka, caleemihiisa waxaa ku jira carotene, fitamiino, cusbada macdanta.
Midhaha geedka faleebadu waxay leeyihiin hoolka choleretic, kor u qaadista expectoration iyo hagaajiyaan dheefshiidka. Waxaa badanaa loo isticmaalaa in lagu dubo iyo sida cuncunka loogu talagalay suxuunta kala duwan, pickles iyo khudradda quraacda.
Noocyada malabka cilantro (dhadhanka iyo muuqaalka)
Malabaha caruurtu waa mid hufan waxaana iska leh noocyo mugdi ah: waxay noqon kartaa mid laga yaabo in uu noqdo midab khafiif ah. Naftiisu waa fiiqan tahay, dhadhanka caramel, sidoo kale wuxuu leeyahay caraf udgoon.
Qaab dhismeedka dhuxusha. Isku-dhejinta qaybo aan bisil ahayn ayaa si dhakhso ah u dhacda - hal illaa laba bilood ka dib bamgareynta.
Waqti ka dib, badeecadani ma adkaato, jilicsan iyo caag ah. Iyada oo kaydinta muddada dheer, ma ahan kuwo caarye ah oo haya sifooyinka sare ee nafaqada iyo dhadhanka.
Awoodahan noocan oo kale ah waxay xaqiijinaysaa in malabkii ka soo samaysan yahay uu leeyahay saameyn antimicrobial.
Waa muhiim! Haddii malabku ka soo jeedo noocyada kala duwan ee midabka, waxa loola jeedaa in ay ku jiraan waxyaabo aan nadiif ahayn ama laga soo ururiyo geedo.
Muuqaalka hooseeya ee malabku waa sharaxay xaqiiqda ah in ay aad u adag tahay in la soo saaro.
Marka hore, inkastoo xaqiiqda ah in coriander waa wax caadi ah ee duurjoogta, waaweyn oo leh warshad this, ku filan si ay u ururiyaan dalagga wanaagsan ee nectar ah, ma jiraan.
Marka labaad, tan mashiinka dabiiciga ah ma aha mid aad u qurux badan oo u uraya ciriiri inta lagu jiro ubax, urta ma soo jiidata cayayaanka. Carafku waa mid aan fiicneyn in xitaa cawska uu magaciisa ka helay ereyga "koris" - oo loo tarjumay "bac". Dhuxulku wuu baaba'aa sida dhirta oo kale.
Marka seddexaad, cilantro waa mid aad u muuqda oo ku kora waddamada diiran.
Sidee loo helaa malab dhuxusha
Caadi ahaan, si ay u helaan malab ka cilantro, beekeepers waxaa lagu qasbay in ay dhigto beeyaal ku dhow dhow beeraha ubax, sidaas oo kale laga reebo bedelka shinnida kale ee beeska.
Haddii cayayaanka ay mashquul yihiin oo keliya ka soo qaadashada malabka oo ka samaysan dhirta oo ha u baddelin dhirta kale ee qajaarka ah, waxaad ku xisaabtami kartaa goosashada xilliyeedka laga bilaabo 1 hektar ilaa 200 kg oo malab ah. Celcelis ahaan, cilantro medoproductivity waa 60-120 kg / 1 ha. Ma aha wax aad u badan.
Ma taqaanaa? Marka la barbardhigo: laga bilaabo 1 ha of acacia for xilli ubax waxaa suurtagal ah in la helo 500-1000 kg ee malab; oo leh qajaar - 60-70 kg; laga bilaabo dhir - 400-500 kg; 1000 kg oo liniin ah; laga bilaabo gabbaldayaha - 30-40 kg.
Waxyaabaha kiimikada ee malab-samey
Qiimaha nafaqada ee malabku ka samaysan yahay mashiinka waa 1314 kJ (314 kcal). 100 g oo ka mid ah badeecada waxa ku jira 0.8 g oo ah borotiinka iyo 81.5 g oo ah karbohidrates, dufan lahayn.
Ariga dhadhanka ah ee dhirta leh iyo dhadhanka malabka dhirtu waxay sharraxaysaa joogitaanka qadar badan oo ah saliidaha lagama maarmaanka u ah - waxaa jira in ka badan 10 nooc oo iyaga ka mid ah (oo ah kaniisada laftiisa - 36).
Midabka mugdiga ah ee malabku wuxuu ka kooban yahay waxyaabo sarreeya oo ka kooban waxyaabo ay ka mid yihiin, birta, birta, manganis iyo naxaas. Intaa waxaa dheer, walxaha kiimikada ee malabku waxaa ka mid ah fitamiinada kooxda B (B1, B2, B9, B6), PP, C iyo waxyaabo kale oo badan. Waxaa jira in ka badan 300 macdan iyo walxaha raadinta ee malab koriyander ah.
Qodobbada waxtarka leh ee malabku
Maaddaama ay ka kooban tahay kiimikada kiimikaad ee adag, dhirta iyo malabku waa alaab qiimo leh oo leh dhadhan gaar ah iyo sifooyin faa'iido leh.
Intaa waxaa dheer, malab sidoo kale wuxuu leeyahay hanti daweyn iyo daaweyn oo labadaba ka takhalusi kara nooc kasta oo cudur ah, iyo xoojinta nidaamka difaaca ee qofka guud ahaan.
Halkan waa liis yar oo iyaga ka mid ah:
Isticmaalka joogtada ah ee malab koronto leh ayaa saameyn ku leh shaqada ee mareenka caloosha iyo mindhicirka, waxay kordhisaa rabitaanka cuntada.
Maaddooyinka qayb ka mid ah malab, waxay xajin karaan garaaca wadnaha iyo si tartiib ah u xiiso geliyaan habka dhexe ee dareenka. Honey waxay u fiicantahay walaaca, niyadjab, daal daba dheeraatay, iyo sidoo kale waxay ka caawineysaa daawada lugta.
Maaddaama ay ka kooban tahay macdanta birta leh, malabka cilantro wuxuu si weyn uga faa'iideysan karaa dadka qaba dhiig-yaraanta.
Mid ka mid ah saamaynta faa'iido leh waa hoos u dhaca sonkorta dhiigga. Waxaa lagu talinayaa in la nadiifiyo weelasha oo dib loo soo celiyo, si loo hagaajiyo aragtida.
Iyada oo ay sabab u tahay sifooyinka bronchodilator, malab ayaa cadeeyay laftiisa daaweynta boronkiitada iyo neefta neefta. Sidoo kale waxaa lagula talinayaa inay saliid ku yeeshaan xuubka afka ee cudurada maskaxda.
Liiska liiska guryaha oo si sahlan u sharaxi doona sababta malabta loo yaqaan 'coriander' ayaa faa'iido leh, waxaad ku dari kartaa saameyn aad u muhiim ah oo saameyn ku leh ragga - awood u leh kordhinta awoodda.
Sida loo isticmaalo malab cilantro, malab koriye ah
Iyada oo ay sabab u tahay inta badan ee guryaha dawooyinka, malab cilantro ayaa laga helay dalabyo dhowr ah: daawo, qurxiyo, karinta. Waxaa la qaadaa labadaba gudaha iyo dibaddaba. Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka loogu talagalay isticmaalka.
Hagaajinta guud ee caafimaadka, kor u qaadida caafimaadka guud ahaan, yareynta khatarta hargabka, hagaajinta aragtida iyo dheef-shiidka, waxaa lagu talinayaa in la qaato hal qaado oo ah malab dhir ah 30-40 daqiiqo ka hor wakhtiga jiifka. Honey waxaa lagu qasi karaa koob biyo ama diir.
Waa muhiim! Ka hor intaadan billaabin malab ka soo duugoobi, iskuday alaabooyinka dawooyinka ee jirkaaga, ogow naftaada ka horjeeda isticmaalka iyo la tasho dhakhtarkaaga.
Xasaasiyadda caanuhu waxay ku taliyeen caano ama shaah malab. Si kastaba ha ahaatee, waxaa haboon in la ogaado in sifooyinka wanaagsan ee sheyga shinni lagu burburiyo heerkul ah 50 ºC.
Si loo kordhiyo hemoglobin ee dhiiga waa la qaadi karaa 1-2 jeer maalintii muuska bislaado oo leh hal qaado oo malab ah.
Cudurada afka laga qaato afka (stomatitis, gingivitis, dhuun xanuun), malab waxaa lagu daboolaa farta lagu duuduubay faashad oo lagu dhejiyay xuubka xuubka ama cunaha.
Waxaad sidoo kale xayirin kartaa malabka, ama afkaaga ku luqluqo saddex jeer maalintii oo laga soo saaro ubaxyo chamomile ah, kaas oo loo diyaariyey sida soo socota: hal qaado oo ah chamomile ku shub 200 g biyo karkaraya, qabow, cadaadis iyo ku dar hal qaado oo malab koriyander ah.
Cagaarshow, waxaad isticmaali kartaa malab samaysan, labadaba gudaha iyo dibadaba. Mararka qaar calool madhan, laba jeer maalintii, qaado faleebo ah hal caleen ah oo ku darsaday hal qaado oo malab ah.
Waxaad sidoo kale sameyn kartaa Saliida xayawaannada la kariyay ee malabkisa dareeraha ah ama isku dar ah juuska dabocase, malab koranto leh iyo saliid saliid (1: 1: 1).
Iyadoo aan awoodin, waxaad isku dayi kartaa beedka malabka. Diyaarintiisa, waxaad u baahan doontaa 500 g oo ah caleemo la jajabiyey (3-5 sano jir), 500 g oo ah malab iyo nus litir oo khamri cas (16-17º).
Binku waa inuu ku adkaystaa shan maalmood qolka madow iyo qabow. Taas ka dib, cadaadis qaado oo qaado shaaha saddex jeer maalintii saacad iyo badh kahor cunto.
Toddobaad ka dib, qadarka ayaa la kordhiyaa hal qaado oo ah. Koorsada daaweyntu waa hal bil, dabadeed isbuuc ka dib ayaa dib loo soo celin karaa.
Ujeeddooyinka qurxinta, malab waxaa lagu daraa maaskarada maqaarka dhibta. Gaar ahaan, macaan dhirtu waxay caawisaa xallinta dhibaatada finanka iyo finanka.
Isticmaalka anti-finna decoction ee caleemo sage (1 qaado oo ah caleemo halkii koob oo biyo ah karkaraya), ayaa lagu dhuftay saacad, iyada oo lagu daro qaadada malab. Waxaa loo adeegsadaa habka looska seddex jeer maalintii.
Waxaad sidoo kale sidoo kale ku dari kartaa Qaado qadar yar oo malab ah oo saliidda maqaarka ah, ama 15 daqiiqo, u adeegso qaabka maaskarada.
Malabaha carafta leh: ka hortagga
Malabaha caruurtu wuxuu noqon karaa mid faa'iido leh oo waxyeello leh. Sidaa daraadeed, marka hore waxaad u baahan tahay inaad fahamto in malab kastaa uu yahay alerjiyo xasaasiyad ah, taas oo macnaheedu yahay in ka hor inta aan la isticmaalin, waxaa lagama maarmaan ah in laga reebo dulqaad shakhsi ah ee sheygan.
Waxa kale oo muhiim ah in la fahmo in malabku aanu noqon karin daawada ugu muhiimsan, laakiin kaliya waa mid ku habboon daaweynta.
Intaa waxaa dheer, waa in aadan ka dhicin qiyaasaha lagu taliyey. Isticmaalka maalin kasta ee qof weyn waa inuu ku koobnaado 100 g, ilmaha - 30 g. Xaalad ka saraysa, laguma talinayo in la qaato sheyga si aan u waxyeeleynin jirka.
Haweenka uurka leh iyo hooyooyinka nuujinaya waa inay la tashadaan dhakhtarka dumarka iyo dhaqtarka caruurta kahor intaan go'aan ka gaarin isticmaalka nidaamsan ee malabku. Tani waxay sidoo kale khusaysaa carruurta ka yar laba sano. Digniinta waa in la qaataa badeecada iyo sonkorowga.
Markaad isticmaasho malab dhoobo, mooyaane kale ayaa laga yaabaa in lagu dabaqo dadka qaata wax daawo ah. Xaaladdan oo kale, wadatashiga takhtarka tagaya waa lagama maarmaan si looga fogaado ismaqor la'aanta iyo saameynta daawooyinka.
Si malabku u sii haysto hantidiisa faa'iido leh inta suurtagal ah, waxaad u baahan tahay inaad ogaato shuruudaha kaydinta. Sidaas, meelaynta kaydinta waa inay ahaato madow, qalalan iyo qabow, laakiin waa suurad wacan in malab aan lagu kaydin qaboojiyaha.
Heerkulka ugu fiican waa + 4 ... +18 ºC, heerka ugu badan ee la oggol yahay waa +35 ºC. Weelka kaydka ayaa ka wanaagsan inuu ka doorto muraayadda ama caagaga. Waa mamnuuc in lagu kaydiyo malabka baakad bireed, waxay ku siin kartaa suntan suntan.
https://lezgka.ru so.lezgka.ru © Waxyaabaha canabka ah 2019